ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင်အချစ်ဆိုတာအလျင်အမြန်မချနိုင်သူကားအဘယ်သူ Says?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇွန်. 28 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
သင်အမှန်တကယ်အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့မီးတောက်များကိုညှိနိုင်သလား 90 မိနစ်သို့မဟုတ်လျော့နည်း? အဘယ်ကြောင့် 90 မိနစ်နှင့်မ 27 မိနစ်သို့မဟုတ်6နာရီ? ဒါဟာအရူးနှင့်ရေတိမ်ပိုင်းအသံသို့မဟုတ်မ? ငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်ထုတ်ဝေသည့်အခါ, အတွက်သင်ဟာကဲ့သို့ပင်ပြည်သူ့စေနိုင်ပုံ 90 စက္ကန့်သို့မဟုတ် Less, လူများကလည်းအရူးနှင့်ရေတိမ်ပိုင်းလို့ထင်ခဲ့တယ်, သူတို့သည်ငါတို့ကတကယ်တော့ကျနော်တို့သူတို့ကိုမြင်လျှင်၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးစက္ကန့်အတွင်းလူတွေကြိုက်ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ကြောင်းသိရှိသည့်တိုင်အောင်. အဲဒီ့အချိန်မရောက်ခင် 90 စက္ကန့်သွားကြပြီ, သင်ကကြာရှည်ခံတဲ့ဆက်ဆံရေးသို့ပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်လှည့်ဖို့သင်သွားရာလမ်းကိုကောင်းမွန်စွာရှိနိုင်ပါသည်, ကချစ်ကြည်ရေးအဘို့ဖြစ်ရမည်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, သို့မဟုတ်အချစ်ဇာတ်လမ်း. သူတို့ကသတိပြုမိကြသည်ဖြစ်စေမ, သင်သိဒါခေါ်လူမှုရေးအရပါရမီရှင်ကလူ, ရုံတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏အပြည့်အဝအခန်းတခန်းထဲသို့လျှောက်လှမ်းမည်သူမဆိုတစ်ဦးမဖြစ်မနေစကားပြောဆိုတက်ဒဏ်ခတ်သူတို့ရဲ့အလောင်းကောင်နှင့်အတူအချက်ပြလှိုင်းကိုထုတ်ပေးပို့ရန်နှင့်ချက်ချင်းတူအခြားသောလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းနည်းလမ်းများဖြင့်ဟောပြောနိုင်သောသူတို့ကိုလူ, ယုံကြည်မှု, သူတို့နှင့်အတူသက်သာခံစား. သင်သည်ထိုသူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသိရန်နှင့်ထိုသူတို့ကအဘယ်သို့ပြီးတာနဲ့, သင်သည်လည်းပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်မျိုးကိုဖန်တီးနိုင်.
ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့်စီးပွားရေးအတွက်, ဒီအဖိုးတန် 90 စက္ကန့်ပျံစတင်ဖြတ်သင်သည်များရှိနိုင်ပါသည်. ညာဘက်အခြေအနေများပေးအပ်, သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအချို့အချက်ပြလှိုင်းများပေးပို့ခြင်းနှင့်လက်ျာအချိန်တွင်တယောက်လမ်းအတွက်ပြောနေတာနဲ့, ဒါကြောင့်လည်းမေတ္တာကိုတစ်ဦးအစပျိုးနိုင်ပါတယ်, ကတိကဝတ်မှ intimacy မှ connection ကိုမှဆွဲဆောင်မှုမှသင်တို့ကိုယူပြီး. စုံတွဲများ၏သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းများအတွက်, ထိုအဖြစ်အပျက်များနီးပါးကချက်ချင်း Photo: AFP, သူတို့ကိုမြင်မြင်ချင်းမေတ္တာ၌ကျရောက်စေ. အများစုမှာစုံတွဲများအလိုလိုဖြစ်စဉ်ကိုခံစားဒါပေမယ့်မီရက်သတ္တပတ်ရုံးတင်စစ်ဆေးနှင့်အမှားအားဖြင့်တဆင့်မိမိတို့သွားရာလမ်း fumble ရှိသည်, လများ, သို့မဟုတ်တခါတရံတွင်ပင်နှစ်အကြာမှာသူတို့နောက်ဆုံးကိုနှိပ်ပါ. သို့သော်ထိုဖြစ်စဉ်ကိုဒါဖြစ်နေစရာမလိုဘူး
ရေးဖို့နိုင်ရန်အတွက် ဤစာအုပ်, သူတို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တခုတခုအပေါ်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်သွယ်လုပ်သကဲ့သို့ငါသည်ခပ်သိမ်းသောကမ္ဘာအနှံ့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများလေ့လာခဲ့. ငါသည်အ Romantic ပါဝင်ပတ်သက်မဖြစ်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများဖြစ်နှင့်သောသူတို့မှပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျသဖြင့်အဘယ်သူသည်စုံတွဲများမှနီးပါးနှစ်ထောင်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးကိုသေချာလေ့လာဆန်းစစ်. ငါအတူတူဖြစ်င့်သောသူစုံတွဲများအားမိန့်တော်မူ 50 လအနည်းငယ်အဘို့အမေတ္တာတော်ကိုမေတ္တာတရားအပြည့်နဲ့ဖြစ်င့်သောသူနှစ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်. ကျနော်သူတို့မှားရတယ်ဘာကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တူညီသောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်မိတ်ဖက်တွေ့ဆုံမေးမြန်း, အဘယ်သို့သောသူတို့သည်မိမိတို့အတွေ့အကြုံတွေကိုလေ့လာသင်ယူ, သူတို့ကကြေညာသူတို့ရဲ့အသစ်အတူမိတ်ဖက်အဖွဲ့များကရတယ်ဘယ်လောက်. ငါသည်အပင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့နှင့်တဲ့လက်ငင်းဆက်သွယ်မှုများကိုဖြစ်စေဘို့မိမိတို့လျှို့ဝှက်ချက်သင်ယူဖို့တောင်ပိုင်းဥရောပ၏နေရောင်ခြည်အပန်းဖြေအတွက် gigolos အားမိန့်တော်မူ, ဘယ်နေရာမှာမဆို, အချိန်မရွေး, နှင့်မဆိုင်းမတွ. ကျွန်မဖျားနာခြင်းသို့မဟုတ်မတော်တဆဖြစ်မှုမှမိတ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့သူတွေကိုနှင့်ပြောဆိုသော, နှင့်အခြေအနေမှန်သူတို့ဘဝအသစ်သောစမေတ္တာကိုဆောင် ခဲ့. သည်အထိသူတို့သည်နောက်တဖန်ချစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခဲ့. ငါသည်ဤစာအုပ်ထဲတွင်စိတ်ကူးတွေကိုစမ်းသပ်ဖို့နှီးနှောဖလှယ်ပွဲနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပေး., တစ်အကျိုးဆက်အဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်. ငါသည်အ သိ. အသည်းအသန်လုံခြုံမှုကင်းမဲ့နှင့်အတူအဘယ်သူကိုယ်ထိလက်ရောက်ချို့ငဲ့ရိုးရာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ, နိမိတ်လက္ခဏာကိုပြ၏အံ့ဖွယ်ကို, သူတို့ကချီအပ်ခဲ့အပြီးမှာပင်၎င်းတို့၏ wildest အိပ်မက်တွေကို ကျော်လွန်. ကွာရှညျခံအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုတွေ့ရှိ
အားလုံးမျှော်လင့်ချက်. ဒီနောက်ပိုင်းဒုတိယအုပ်စုငါတစ်ခုခုအမြဲလူသိများအားဖြည့်: အဲဒီမှာလူတိုင်းအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသူတို့အနည်းဆုံးကမျှော်လင့်ကြသောအခါထိုသူတို့မကြာခဏအချင်းချင်းတွေ့.
ကိုးဆယ်မိနစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ကိုသင် tick သူတို့ကိုအလားတူလုပ်သင်တို့အထဲသို့နက်ရ​​ှိုင်းစွာမလုံလောက်ကြည့်ရှုဖို့ခွင့်ပြုစေသည်သောအရာကိုတစ်ဦးခိုင်ခံစားမှုရရှိရန်အခြားသူတစ်ဦးသို့နက်ရ​​ှိုင်းစွာမလုံလောက်ကိုကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏.